Shirkii Wada Tashiga ee u Dhaxeeyey Jaaliyada SanDiego iyo Jaaliyada London oo Guul ku Dhamaaday – Rasaasa News
Shirkii Wada Tashiga ee u Dhaxeeyey Jaaliyada SanDiego iyo Jaaliyada London oo Guul ku Dhamaaday
Jul 19, 2011 Shirkii Watashiga Ahaa ee u Dhaxeeyey Jaaliyada SanDiego iyo Jaaliyada London oo Guul ku Dhamaaday
Shirkii wadatashiga ahaa ee u dhaxeeyey Jaaliyada SanDiego iyo Jaaliyada London oo si baaxwayn leh looga soo qayb galay, guulna ku dhamaaday.
Shirka ayaa lagu qabtay hoolka Nabada caanka ku ah ee la yidhaahdo East African Cultural Center. waxaa ka soo qaybgalay shirka qaybaha kala duwan ee bushada sida; odayaasha, aqoonyahanka, waxgaradka magaalada sandiego.
Waxaa kale oo ka soo qaybgalay shirka dhamaan Ururka Dhallinyarad Somalida Ethiopia iyo xubno ka mid ah Ururka ONLF ee naba qaatay.
Arimaha shirkan laggaga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii ay Jaaliyaduhu uga qayb qaadan lahaayeen wax ka qabashada Abaaraha iyo macaluusha ka jirta degaanka. Waxaa kale oo laggaga hadlay ka qayb qaadashada horumarinta degaanka sida; maalgashiga iyo samaynta ururo horimarineed.
Dhinaca kale waxaa aad loo amaanay dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo iyadu isku taxalujinaysa in ay samayso is badal nololeed iyo mid nabadeedba. Waxaana la isku raacay in gacan laga siiyo dawlada degaanka Somalida dadaalada ay ugu jirto dhinayada horumarinta iyo nabada.
Waxaa kale oo lagu lafa guray shirka in la xoojiyo isku duubnaanta Jaaliyadaha ka jira aduunka dacaladiisa ee u dhashay degaanka.
Shirka waxaa ka hadlay Gudoomiyaha Ururka Dhallinyarada Somaalida Ethiopia SanDiego Abdirizak Dahir Budul oo ku booriyey dadkii jirka joogay in la xoojiyo nabada, midnimada iyo horumarinta.
Waxaa kale oo ka hadlay shirka Ahmed Mursal oo ka mid ah xubnaha Ururk ONLF ee nabada oo aad ugu dheeraday in uu ururku si xoojinayo nabada iyo arimaha horumarka.
Sidoo kale, waxaa isna ka jeediyay khudbad qiiro lahayd Maxamed Dahir Budul oo ka hadlay sidii wadankii ay noqon lahayd cidii awooda.
Ugu dambayntiii waxaa cod baahiyaha lagu soo dhaweeyay Engineer Xaaji Abdirahman Maxamed Ahmed (Indho-gaale), oo ahaa waftigii ka yimid Jaaliyada London ee UK. Xaaji Abdirahman wuxuu fariimo qaali ah ka waday Jaaliyada London, oo uu u faah faahiyay dadkii sharafta lahaa ee yimid shirka, ka dibna wuxuu ku dheeraaday sidii loo xoojin lahaa nabada ka curatay deegaankeena. Wuxuu kale oo uu Xaajigu ka hadlay sidii la iskugu duubnaan lahaa dhamaan shacabka nabada jecel.
Dhamaadkii shirka waxaa la soo saaray go,aamadan hoos ku qoran;
1. In laga qayb galo horumarka, nabadqaliyada, maalgashiga dalka hooyo
2. In la abaabulo sidii wafdi balaadhan loogu diri lahaa walka.
3. In la isku xidho Jaaliyadaha u dhashay degaanka ee ka jira aduunka.
4. In si buuxda loola shaqeeyo Dawlada Deegaanka Soomalida E$thiopia.
Ethiopian News in Somali July 18, 2011
Ethiopian News in Somali July 21, 2011